धन कमाउने सपना (वियोगान्त प्रेम कथा) - chukuprakash | Nepali Lifestyle,Nepali literature,entertainment,Software
Home » कथा » धन कमाउने सपना (वियोगान्त प्रेम कथा)
उमेश मेरो जिबन साथी हो । हामी दुईको बैवाहीक जिवनपछि हाम्रो घर दु:ख
सुख चली राखेकै थियो । अचानक उमेशलाई बिदेश जाने सोंच आयो, दिनको उज्यालोलाई छल्दै रातको अँधेरीले पच्छाएको थियो । बेलुकाको खाना खाईसकेपछि सँधैजसो टेलीभिजनमा हुने प्रसारणहरु हेरीन्थ्यो, उमेश केही भन्न लागे जस्तो गरी मलाई एकोहोरो हेरी रहे । उमेश के भयो हजुरलाई, आज किन यसरी हेरीरनु भाको ?
- त्यस्तो के कुरा हो र आजसम्म हामी दुई बिच लुकेर बसेको आजसम्म हजुरको कुनै कुरामा रिसाएकी छु र ?
- कस्तो कुरा गर्नु भएको हजुर ? मेरो सुख भनेको नै हजुर हो अनी हजुरलाई प्रदेशको खाडीमा पठाएर म कसरी खुसी रहन सक्छु ? जसोतसो गुजरा चलेकै छ बिदेशमा गएर बगाउने पसिना यही आफ्नो मातृभुमिमा बगाए यही सुन फल्छ, यहि राम्रो हून्छ ।